540 million oo isticmaala Facebook ga oo la helay xogtooda oo dayacan, taalana serveradda Amazon – Fatuux Tech
Fatuux Cade	Hacking News, Tech News	 April 4, 2019 1 Minute
Iyaddoo baryahaan facebook ey u aheyd maalmo xun kadib markii la helay 400 mallion oo isticmaalayaal ah password kooda, haddana xaaladdi wey ka dartay..
Tiro dhaafeysa haaf billion oo isticmaalayaal ah ayaa la helay xogtooda oo ku dayacan servers ka Amazon iyadoo difaac la’aan ah siduu sheegay website ka The Hacker News. Xogtaas oo lasoo bandhigay ma aysan aheyn mid si toos uga imaaday facebook, ee waxaa soo aruuriyay application kale oo 3aad ay isticmaalaan facebook app developers.
Cilmi baarayaal oo ka shaqeeya Cybersecurity firm UpGuard aye shaley soo heleen in xogtaas ay ka kala timid labo meel oo kala ah; Midda koowaad waxaa leh Mexican Media Company oo lagu magacaabo Cultural Colectiva, Tan 2aad na waxey ka timid Facebook application ay wax wadaagaan oo lagu magacaabo “At the pool”- 2daba waxey u daayeen in la galo ayagoo dhigay internet ka.
In ka kabadan 146 GB oo xog ah ayee aruurisay Cultural Colectiva waxeyna ahaayeen xog ay lahaayeen 540 oo isticmaala facebooka. Waxaa ka mid ahaa coomments, likes, reactions, magacyadda account nada, IDs ka dad ka isticmaala facebook ga, iyo in badan.
Xogta 2aad uu aruuriyay “At the pool” waxaa ku jiray, xog ku saabsan isticmaalaha facebook ga sida friends ka, likes, groups, iyo check-in location, sidoo kalena waxaa ka mid ahaa magacyadda dadka isticmaala iyo passwords kooda oo si cad loo arki karo iyo emails ey leeyihiin dad gaaraya 22,000.
Waxey aaminsan yihiin qollada UpGaurd in passwords ka la helay ay kaliya yihiin mid loo isticmaalay ” at the pool” application kaas. Balse waxaa markasta suurta gal ah in dadka ey isticmaalaan hal password ayagoo u kala isticmaalayaan meelo kala duwan. Waxeyna sheegen passwords kaas ineysan aheyn facebook accounts ka.
Ma aha markii koowaad ey soo wajaheyso facebook xaalad sidaan oo kale ah oo gacan sadaxaad soo fara galiso arimaha istcmaalayaasheeda. Waxaa lawada ogaa Cambridge Analytica xogta ay soo bandhigtay sanadkii lasoo dhaafay dabayaaqadiisa. Gunaanud ahaan ma noqon karaa facebook mid laisku haleeyo xogtaadana aad ku amaaneysato????
waxii faah faahin ah ka daalaco walaal The Hacker News.
Previous Post Waa maxay farqiga u dhaxeeya Systems ka jira dunidda!!!
Next Post 8 Adeeg oo lacag la’aan ah aad uga faaideysan karto Twitter ka.